Iziphumo zeMichiza ukusuka ekuxubeni iBleach kunye ne-Amoniya
Ukuxuba i-bleach kunye ne-ammonia kuyingozi kakhulu, kuba izityalo ezinobuthi ziya kukhutshwa. Ikhemikhali eyingozi kakhulu eyenziwe yindlela eyenziwa ngayo yi-chloramine umphunga, onokukwazi ukwenza i-hydrazine. I-chloramine ngokwenene iqela leemveliso ezihambelana nazo zonke izibilini zokuphefumula. I-Hydrazine nayo iyakhathaza, kunye kunye nayo ingabangela i-edema, intloko, isisongulu, kunye nokuthinjelwa.
Kukho iindlela ezimbini eziphambili zokudibanisa ngephutha le michiza.
Eyokuqala ukuxuba iimveliso zokucoca (ngokubanzi ingcamango embi). Iyesibini isebenzisa i-chlorine bleach ukuze ihlaziye i-disinfect water equkethe into ebalulekileyo (njengokuba isuka echibini).
Nanku ukujonga kwiimpendulo zamakhemikhali ezibandakanya ukuxuba i-bleach kunye ne-ammonia, kunye neengcebiso zokuqala zengcebiso xa ubonakaliswe ngengozi kumxube we-bleach kunye ne-ammonia.
Iikhemikhali eziveliswa ngokuxuba iBleach kunye ne-Amoniya
Qaphela ukuba nganye nganye yeekhemikhali inetyhefu, ngaphandle kwamanzi notyuwa.
NH 3 = ammonia
HCl = i-hydrochloric acid
I-NOCl = i-hypochlorite ye-sodium (i-bleach)
Cl = klorine
I-Cl 2 = i-klorine igesi
NH 2 Cl = chloramine
N 2 H 4 = i-hydrazine
NaCl = i-chloride ye-sodium okanye ityuwa
H 2 O = amanzi
Mhlawumbi ukuphendula kweMichiza ekuxubeni iBleach kunye ne-Amoniya
I-bleach iyanqabela ukwenza i- hydrochloric acid , ephendula nge-ammonia ukuba ifake i-chloramine fumes:
Okokuqala i-hydrochloric acid yenziwa:
Emva koko i-ammonia kunye ne-klorine igesi ifumene ekwenzeni i-chloramine, ekhutshwa njengomphunga:
Ukuba i-ammonia ikhona ngokwemfuneko (leyo ingaba okanye ayiyi kuba, kuxhomekeke kumxube wakho), i-hydrazine yamanzi enobungozi kwaye inokutsha. Nangona i-hydrazine engcolileyo ingenakuqhuma, iyasetyha, kunye nayo iyakubilisa kwaye ifake i-liquid echaphazelayo.
Yintoni Oyenzayo Ukuba Uxuba iBleach kunye ne-Amoniya - Usizo lokuqala
Ukuba wenza ngokungahambi kakuhle ukuba uvelele kwi-fumes ekuxubeni i-bleach kunye ne-ammonia, ngokukhawuleza ususe kwindawo eseduze uze ufune unyango lwengxamisekileyo. Iipompo ziyakwazi ukuhlasela amehlo akho kunye neembumba, kodwa isongelo esikhulu sisuka kwi-gas.
Hamba kwindawo apho amayeza adibene khona. Awukwazi ukubiza uncedo xa unxibekile ngumoya.
Ifowuni ye-911 ngoncedo oluphuthumayo. Ukuba ngokwenene ungacingi ukuba yinto embi, ngoko-ke nceda ubize i-Poison Control malunga neengcebiso malunga nokusingatha imiphumo emva kokutshatyalaliswa nokucoca iikhemikhali. Inombolo yoLawulo lweTyhefu yile: 1-800-222-1222
Ukuba ufumana umntu ocinga ukuba udibanise i-bleach kunye ne-ammonia, amathuba okuba akayi kuqonda. Ukuba unako, susa umntu kumoya omtsha , mhlawumbi ngaphandle. Ifowuni ye-911 ngoncedo oluphuthumayo. Musa ukuxhoma uze ufundiswe ukuba wenze njalo.
Gcwalisa ngokupheleleyo indawo ngaphambi kokuba ubuye uhlahle umbane . Funa imiyalelo ethile evela kwi-Control Poison ukuze ungazilimazi. Unako ukwenza le mpazamo kwindawo yokuhlambela okanye ekhitshini, ngoko uyeke uze ufune uncedo, ubuyele kamva ukuvula iwindi, vumela ixesha lokuba imfucuza idibanise, uze ubuye uhlambuluke. Nciphisa umxube weekhemikhali ngamanzi amaninzi. Gqoka iiglavu, njengokuba uthanda i-bleach okanye i-ammonia.
Inkcazo kunye nemizekelo yeeNgxelo ezichanekileyo
I-Quadratic Formula - enye ye-x-thintela
Imfazwe Yehlabathi I Imifanekiso